Ahoana ny fomba hidirana na hidirana PDF an-tserasera miaraka amina programa na tranokala | Famoronana an-tserasera
Efa nitranga taminao ve fa, rehefa miasa amina lohahevitra iray, dia manana rakitra pdf maromaro ianao ary tsy maintsy mijery iray, avy eo iray hafa, miverina amin'ilay voalohany ...? Raha izany dia azo antoka fa efa nieritreritra imbetsaka ianao sao hisy fitaovana hanatevin-daharana na hanatevin-daharana PDF hanamorana ny asanao, sa tsy izany?
Rehefa nivoaka ny PDF taona vitsy lasa izay, tsy afaka natao izany raha tsy voatery hamerina ny asa rehetra indray. Na izany aza, niova ny zava-drehetra ary afaka misafidy ny hiditra ao amin'ny PDF amin'ny alàlan'ny fitaovana ianao. Te hahafantatra ve ianao?
1 Raha mametraka PDF, dia inona no ilana azy?
Raha mametraka PDF, dia inona no ilana azy?
Misy ireo izay manohana ny fametrahana PDF sy ireo izay tsy tia an'io hevitra io. Ary ny marina dia miankina daholo izany. Manana ny teboka tsara sy izay tsy dia tsara izy io.
Ohatra, ny fampifangaroana PDF dia midika fa ho lehibe kokoa ny haben'ny fisie, ary raha ankoatry ny lahatsoratra dia misy sary, latabatra ary singa hafa izay mahatonga azy mavesatra kokoa, mety hiafara ho lehibe tokoa izany, rehefa manodinkodina azy ao anaty mety tsy ho vitan'ny solosaina ny manodina azy raha tsy mihantona tsindraindray.
Tokony ho raisina ihany koa fa ny isan'ny pejy dia hitombo be, izay hisy fiantraikany ankolaka amin'ilay olona. Tsy mitovy ny mahita fa manana antontan-taratasy misy pejy 100 noho ny iray amin'ny 1000 ianao, mety hahakivy anao bebe kokoa izany, indrindra raha mila mandalina ireo pejy rehetra ianao.
Ireo izay manohitra ny fampiarahana ny PDF dia tsy miaro ny voalaza etsy ambony ihany, fa miady hevitra ihany koa fa, raha toa ka lohahevitra samy hafa izy ireo, dia tsara kokoa ny manana pdf ho an'ny tsirairay, amin'ny fomba iray, rehefa miasa, dia azonao atao ny manangona azy io ary manohy miaraka amin'ireto manaraka ireto, tsy manana ny zavatra rehetra ao anaty antontan-taratasy iray ihany.
Na izany aza, raha iray amin'ireo te-hiditra PDF ianao dia ireto misy fitaovana iray hahatratrarana azy.
Iray amin'ireo fandaharana an-tserasera voalohany izay holazainay aminao ny iray amin'ireo iray amin'ireo fanta-daza indrindra, tsy ho an'ny fidirana amin'ny PDF ihany, fa koa amin'ny famadihana ireo rakitra ho antontan-taratasy marobe (PDF ho Word, Word to JPG ...).
Ny fomba fampiasana azy dia tena tsotra. Tokony hanomboka amin'ny alàlan'ny fandehanana mankany amin'ny pejin-tranonkala izay tsy maintsy hisafidiananao ireo antontan-taratasy PDF izay tianao hapetraka. Ireo dia tsy tokony ho eo amin'ny solosainao fotsiny, fa manome anao ny safidy mampakatra azy ireo avy amin'ny Drive, Dropbox, sns.
Raha vantany vao nampakatra azy ireo ianao dia tsy mila miandry minitra vitsy fotsiny ianao hametrahako azy ireo ary omeko anao hampidina ny rakitra feno. Mazava ho azy fa arakaraka ny lanjan'ny antontan-taratasy tany am-boalohany, rehefa atambatra, dia vao mainka handanja ny valiny farany.
Ity safidy ity dia tsy dia fantatra loatra, fa azonao atao ny mampiasa azy hanambatra PDF maromaro ho rakitra iray. Ary ahoana ny fomba fampiarahana PDF? Tena tsotra, tsy maintsy manaraka ireo dingana ireo ianao.
Mandehana any amin'ny pejy an'ny Adobe Merge PDF.
Ao amin'ny pejy dia ho hitanao fa afaka misafidy fisie etsy ambony ianao, na misintona ary mandatsaka fisie ao amin'ilay faritra. Mila mifidy fotsiny izy ireo hoe iza avy ireo ary tsindrio ilay fitaovana fampiraisana PDF.
Azo averina alamina indray ny rakitra, zavatra tsy avelan'ny fitaovana an-tserasera maro. Raha vantany vao azonao ireo dia mila tsindrio fotsiny ireo rakitra atambatra.
Andraso minitra vitsy dia hanana ny PDF mitambatra ianao.
Aorian'izay, raha te handamina ireo pejy ianao dia zarao ny fisie sns. dia tsy maintsy miditra amin'ny Adobe ianao.
Fitaovana iray hafa hanatevin-daharana PDF an-tserasera dia ity, SmallPDF. Ny zavatra tsara dia, raha zavatra ataonao matetika izy io, ka tsy mila mankany amin'ny pejy foana ianao dia afaka mametraka extension ao Chrome mba hanamorana ny zava-drehetra ho anao.
Ary ahoana no fomba hanaovanao azy? Voalohany dia tsy maintsy mankany amin'ny pejin-tranonkala ianao, indrindra amin'ilay faritra mba hidirana PDF. Avy eo, tsy maintsy mampakatra ilay rakitra ianao, na amin'ny solosainao, avy amin'ny Dropbox, Google Drive na tahiry hafa ao anaty rahona.
Rehefa nakarina izy ireo dia azonao atao ny manambatra ireo fisie tadiavinao ary tsindrio ny bokotra Atambatra ny PDF anao.
Afaka minitra vitsy dia ho hitanao ireo rakitra natambatra, ary azonao atao ny misintona azy ireo na mandefa azy ireo amin'ny alàlan'ny mailaka, mandika ny rohy ary mizara azy, manery azy ireo, sns
Efa niresaka taminao imbetsaka momba an'ity fitaovana ity izahay. Izy io dia tranonkala iray ahafahanao mamadika rakitra ho endrika maro. Fa, ho fanampin'izay, mamela anao hiditra amin'ny PDF izy io. Mazava ho azy, eto dia manana fetra ianao ary izany dia, tsirairay avy, ny PDF dia tsy afaka mihoatra ny 100MB ary, amin'ny ankapobeny, dia tsy afaka mihoatra ny 150MB koa izy ireo. Ho fanampin'izay, 20 PDF ihany no azonao ampiarahana, tsy mamela anao intsony izany.
Raha ny fampiasana azy dia mitovy amin'ny hafa ihany izy amin'ny ankapobeny, mila mampakatra ny fisie fotsiny ianao ary miandry azy hamela anao hisintona iray. Azonao atao ihany koa ny mamadika ilay antontan-taratasy farany ho lasa endrika hafa raha mila izany ianao, na Word, JPG, sns. Mazava ho azy, miaraka amin'ny fetra misy, azo atao fa misy fetra ihany koa rehefa mahazo sary.
Ity dia tranonkala iray hafa azo ampiasaina raha tsy manana PDF mavesatra loatra ianao. Mora ny mampiasa rindranasa tranonkala, fa miaraka amin'ny PDF tsy lehibe noho ny 200MB. Ny fomba fiasany dia mitovy amin'ireo rehetra teo aloha, izany hoe mifidy ireo rakitra tianao hapetraka ianao ary afaka segondra vitsy dia ho vitanao izany hahafahanao misintona azy na mizara izany amin'ny hafa.
Ho fanampin'izany, toy ny tranokala maro hafa, azonao atao koa ny manova ny PDF ho endrika hafa, raha mila izany ianao, nefa tsy mila miala amin'ilay pejy mihitsy.
Amin'ity tranga ity dia manasongadina ity pejy ity izahay satria tsy vitan'ny hoe mamela anao hiditra ao amin'ny PDF ianao, fa afaka miditra ao amin'ny PDF, Teny na endrika hafa koa hanatevin-daharana azy ireo ary hamadika azy ireo ho PDF iray ihany.
Mitovy ny dingana. Raha vao miditra ny tranonkalany ianao dia mila misafidy izay rakitra tianao hidirana ary tsindrio ny bokotra Join files. Afaka minitra vitsy dia hanana ilay fisie farany ianao ary azonao atao ny misintona azy tsy mila olana (na zarao izany na alefaso amin'ny mail).
Araka ny hitanao dia manana safidy ianao hisafidianana ny hiditra ao amin'ny PDF saingy tadidio fa, tahaka ny ahazoanao tombony dia hisy ihany koa ny lesoka mety hahatonga anao hieritreritra an'io firaisana io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Tutorials » Ahoana ny fomba hidirana na hidirana PDF an-tserasera